ချိုင်းနား ရှေးဟောင်း နတ်ဘုရားကားမျိုးကို မရိုးနိုင်အောင် ကြည့်ချင်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတဲ့ ၃ လောက ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးတစ်ခုက စောင့်ကြိုနေပါပြီ။ ဇာတ်လမ်းမထပ်အောင် ဖန်တီးရိုက်ကူးထားတဲ့ “Chang Lan Jue” မှာတော့ အဓိက ဇာတ်လိုက်တွေအဖြစ် Dylan Wang နဲ့ Esther Yu တို့က ပေါင်းဆုံ ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့.. Po Xin မျိုးနွယ်စုက မသေမျိုးနွယ် ကောင်မလေးတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ တအုပ်စုလုံး မိစ္ဆာဘုရင် Dong Fang Qing Cang (Dylan Wang) ရဲ့ ရှင်းလင်းနှိပ်ကွပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်း တစ်သောင်းကြာတဲ့အချိန်မှာ နတ်မျိုးနွယ်ဝင် မသေမျိုး Xiao Lan Hua (Esther Yu) အဖြစ် တဖန်ပြန်လည် အသက်ဝင်လာပြီးနောက် သူမရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ဟောင်းတွေဟာ တစပြီးတစ ‌ထင်ဟပ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ထိုအချိန်က နတ်ဆိုးဘုရင် Dong Fang Qing Cang ဟာ Hao Tian မျှော်စင်မှာ ဖမ်းချုပ်ခံထားရပြီး သူ့ဘဝကြီး လွတ်မြောက်အင်အားကြီးလာဖို့ အကြံထုတ်နေခဲ့တာပါ။ သေမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ မိစ္တာသခင်ကြီးကတော့ နတ်မိမယ် Xiao Lan Hua ရဲ့ မသေနိုင်တဲ့ဝိဉာဉ်ကို အသုံးချပြီး သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကျိန်စာကို ပွင့်ထွက်လာအောင် နည်းမျိုးစုံကြိုးစားပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ နှလုံးသားမရှိဘဲ အေးစက်ခက်ထန်တဲ့ မိစ္တာဘုရင်ကြီးတစ်ယောက် နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ နတ်မိမယ်လေးကို သံယောဇဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ… အချစ်နဲ့အမုန်း လွန်ဆွဲမှုကြားမှာ ဘယ်အရာက အနိုင်ရသွားမလဲ? အတိတ်ကို အားလုံးပြင်ဆင်ပြီး အရာရာကို မေ့ဖျောက်ခွင့်လွှတ်ကာ ရှေ့ဆက်‌သွားနိုင်မလား? ဘဝခြားလွန်းတဲ့ နတ်မိမယ်နဲ့ မိစ္ဆာဘုရင်တို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုဟာ အဆုံးသတ်ကောင်းပါ့မလား? ဆိုတာကို တကယ်ကို ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Dylan Wang ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ဒီ မိစ္ဆာဘုရင်ဇာတ်ရုပ်ကို မင်းသားအနေနဲ့ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Esther Yu နဲ့ သရုပ်‌ဆောင်ပီပြင်လွန်းတဲ့ Dylan Wang တို့ရဲ့ တွဲဖက်မှုက နာမည်ကျော်ရေပန်းစားလာဦးမလားဆိုတာကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Next ခုနှစ်လကြာသွားသည့်တိုင် အငယ်ဆုံး Sehun လေးပေးတဲ့ ရွေဆွဲကြိုးကို လုံးဝမချွတ်ဘဲ အမြတ်တနိုးဆွဲထားတဲ့ Xiumin »
Previous « Squid Game ရဲ့ ကြည့်ရှူနှုန်းကို အမီလိုက်နေတဲ့ ထွက်ရှိတာမကြာသေးတဲ့ နာဘီမလေးရဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်